Home Wararka Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay Magaalada Auckland ee dalka New Zealand
Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay Magaalada Auckland ee dalka New Zealand
Magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa lagu dilay wiil Soomaali ah, kadib markii ay rasaas ku dhifteen shakhsiyaad ay weli ku raad joogaan booliska magaaladaas, iyadoo ay socdo baaritaan la xiriira dilkiisa.
Auckland ayaa ka mid ah magaalaayinka ay Soomalida ugu badan ee waddanka New Zealand ay deganyihiin. Soomaalida ayaa qaarkood u guurey dalka Australia, si ay carruurtooda u helaan nabad ay ku noolaadaan, waxba ku bartaan maadaama ay yihiin kuwa ka dhaqan iyo diin duwan bulshadda kale ee ay la nool yihiin.
Bishii March 15, sanadkii 2019 nin hubeysan oo nacaybka Islaamka madaxa maray ayaa toogasho ka fuliyay labo Masjid oo ku yaalla magaaladda Christchurch, ee dalka New Zealand, isagoo dilay 51 qof oo Muslim ah oo ku jiray salaadda Jimcaha. Ninkan oo kasoo jeeda dalka Australia ayaa la qabtay, waxaana uu ku jiraa xabsi ku yaalla dalkan, iyadoo xukuno kala duwan dhawaan lagu riday.